I-Galaxy S7 ne-LG G5 azikwazi ukufaka izinhlelo zokusebenza ku-MicroSD | Izindaba zamagajethi
I-Galaxy S7 / Edge ne-LG G5 azikwazi ukufaka izinhlelo zokusebenza ekhadini le-MicroSD
UPablo Aparicio | | Android, AmaSelula
Ngenkathi abakwaSamsung bethula i-Galaxy S6 yayo ngonyaka odlule, akuzange kube nokugxekwa okuncane okutholakele ngokususa amaphuzu amabili athakazelisa kakhulu kwimodeli yangaphambilini: impahla eyanikeza ukumelana namanzi nokususwa kwesikhala sekhadi le-SD. Kungakho kulo nyaka babuyele emuva bafaka womabili amaphuzu ku- I-Galaxy S7. Enye i-smartphone ethakazelisa kakhulu evezwe eMWC eBarcelona yi-LG G5, futhi bobabili bangasebenzisa i- ikhadi le-MicroSD ukunweba imemori yedivayisi, kepha ngama-nuances.
Ezinguqulweni ezedlule ze-Android, ikhadi le-SD belingasetshenziswa kuphela ukonga idatha, kepha ngokufika kwe- I-Android 6.0 Marshmallow yonke imemori ingasetshenziswa njengebhlokhi, ngakho-ke uhlelo aluhlukanisi phakathi kwememori yefoni nememori yekhadi le-SD. Eqinisweni, ayikho indlela yokuhlukanisa futhi ingasetshenziswa ukufaka izinhlelo zokusebenza. Kepha lezi zindaba ezinhle zibukeka zingekho kwi-Galaxy S7, Galaxy S7 Edge ne-LG G5.
1 I-Galaxy S7, i-Galaxy S7 Edge ne-LG G5 zisebenzisa uhlelo oludala lwefayela
2 Inhloso yazo zombili izinkampani ukugwema ukudideka
I-Galaxy S7, i-Galaxy S7 Edge ne-LG G5 zisebenzisa uhlelo oludala lwefayela
AbakwaSamsung nabakwa-LG bathathe isinqumo sokugcina i- uhlelo lwefayela elidala, okusho lokho izinhlelo zokusebenza azikwazi ukufakwa ekhadini le-MicroSD. Vele, njengenjwayelo, ingasetshenziswa ukugcina umculo, amavidiyo, izithombe nezinye izinhlobo zemibhalo. Inkinga ithinta kuphela izinhlelo zokusebenza futhi ingaba yimbi noma inciphe ngokuya ngokusetshenziswa okwenziwe ngumsebenzisi we-terminal: uma izinhlelo zokusebenza ezinzima zifakiwe, njengemidlalo yekhwalithi, ikhadi le-MicroSD ngeke lisebenze futhi imemori kuzofanela isetshenziswe. zocingo.
Isizathu se-Samsung sokusebenzisa uhlelo oludala ukuthi indlela ye- uhlelo olusha luyadida. Ku-Android 6.0 Marshmallow, ikhadi le-MicroSD kufanele lifomethwe kusuka kudivayisi ukuze lisetshenziswe. Njengengxenye yohlelo nokukhulisa ukuphepha, idatha ibethelwe. Lokhu kufanele kube yinto enhle, kepha okubi ukuthi ikhadi alinakususwa ngokukhululeka, ngoba alikwazi ukusetshenziswa kwenye ifoni noma ikhompyutha. Izosebenza kuphela kudivayisi ebifomethwe kuyo, ngakho-ke ayisizi ngalutho uma usuphumile. Abakwa-LG abakaze baphawule, kepha izizathu zayo kungenzeka ziyefana nezakwa-Samsung.
Inhloso yazo zombili izinkampani ukugwema ukudideka
Abasebenzisi abebelokhu besebenzisa lezi zinhlobo zamakhadi nabo bajwayele ukubakhipha kudivayisi ukuze zisebenzise kwenye ikhompyutha, ngakho-ke konke kubonakala kukhombisa ukuthi bobabili i-Samsung ne-LG bebefuna ukuqhubeka nalo mkhuba futhi banqume ukubeka eceleni umsebenzi omusha we-Android ukuze baqhubeke besebenzisa uhlelo oludala.
Sebenzisa uhlelo oludala ngokuqinisekile kuzodida kancane, kepha kungaba yinkinga kwabanye abasebenzisi. Kokubili i-Galaxy S7, i-Galaxy S7 Edge ne-LG G5 zifika ngefayela le- Imemori yangaphakathi ye-32GB (okungenani ezimakethe eziningi). Izikhumulo zeSamsung zamukela amakhadi afinyelela ku-200GB, kanti i-LG G5 yamukela amakhadi afinyelela ku-2TB. Asikwazi ukusho ukuthi kuncane impela, kepha konke lokho kugcinwa kuyachitha uma lokho esikufunayo ukufaka izinhlelo eziningi kanye / noma ezisindayo kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, kukholelwa ukuthi, ngokususa isikhala esisetshenziswe uhlelo, kusuka ku-32GB yabasebenzisi bokugcina cishe yi-23GB kuphela ezotholakala. Ngokusobala, lokhu kuzoba ngokwanele kubasebenzisi abaningi (ngiyazi amacala lapho benokwanele khona nge-4GB noma i-5GB kuphela), kepha "ama-gamers" kufanele akubhekele konke lokhu. Imidlalo eminingi enezindaba nezithombe ezinhle inesisindo esiphakathi kuka-1GB no-2GB futhi ngokufaka ezimbalwa singaphelelwa isikhala sokufaka ezinye izinhlelo zokusebenza. Noma kunjalo, esimweni esibi kakhulu, ungahlala ususa imidlalo engeke isetshenziswe ngesikhathi esithile.
Ingabe isinqumo se-Samsung ne-LG sonakalisa izinhlelo zakho zokuthenga enye yezimpawu zabo zakamuva?
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Galaxy S7 / Edge ne-LG G5 azikwazi ukufaka izinhlelo zokusebenza ekhadini le-MicroSD
Kunqunywe kahle yi-Samsung ne-LG. Ukuhambisa izinhlelo ezinzima ku-sd kunezicelo ezingenakubalwa ezithandwa kakhulu isikhathi eside. Endabeni yami ngisebenzisa i-link2sd. Cishe inani lenqama yedivayisi alinandaba nami ngenxa yalolu hlelo lokusebenza.
Kubukeka kukuhle kakhulu kimi kusuka ku-2, ngoba enye inkinga engachazwanga ukuthi kuya ngesigaba sekhadi le-sd kuzoshesha noma kuhamba kancane lapho kufundwa futhi kubhalwa imininingwane. Iningi labantu lifaka imemori khadi isigaba 3 (esishibhile) nemiphumela yokuthi iselula ithatha isikhathi eside ukuvula umdlalo noma uhlelo lokusebenza olufakwe ekhadini. Ngale ndlela baqinisekisa ukuthi iselula ihamba ngokushesha okukhulu.
Abaphumelele ama-Oscar abayi-15 abebekhona kuqala esimeni sabo
IXiaomi Mi5 isivele isemthethweni